Ny voaloboka dia sakafo misy poizina ao amin'ny alika izay mety miteraka fahafatesana | Tontolo alika
Tiako ny alikako. Manomboka amin'ny lalao ka hatramin'ny fatoriana amin'ny fandriana eo akaikin'izy ireo dia eo anilako foana izy ireo rehefa ao an-trano aho. Ny hoe tompona biby, tsy maintsy azonao antoka izany ny sakafo nohaninao tsy manimba ho azy ireo. Izany dia nilaza fa olona maro no hieritreritra ny fotoana rehetra nanomezany ny sakafon'ny biby fiompy ao ambanin'ny latabatra, rehefa azony ireo "maso alika kely" ireo.
1 Sakafo alika manimba
2 50% ka hatramin'ny 75% ny alika maty noho ny tsy fahombiazan'ny voa
3 Ny voaloboka dia poizina amin'ny alika
Sakafo alika manimba
Indray mandeha, taorian'ny nanipazany voaloboka tamin'ny tany, dia nibedy ahy ny nenitoako ary nampitandrina ahy izy ireo ny voaloboka dia mety hiteraka vato voa amin'ny alika. Tsy noheveriko mihitsy hoe io voankazo io, izay mahasalama ny olombelona, ​​dia ho toy izany manimba alika.
Mahasoa ny olombelona ny voaloboka, toy ny misy vitamina sy mineraly maros, miampy fibre. Ilaina mihitsy aza izy ireo amin'ny fisorohana aretina aretim-po, aretim-po ary lalan-drà, toy ny ny voaloboka dia misy flavonoid, izay manampy amin'ny fampihenana ny tahan'ny kôlesterôla sy ny loza ateraky ny aretim-po.
Izany dia nilaza, mahafaty ny alika ny fanapoizinana voalobokasatria mety hiteraka zavatra tafahoatra toy ny tsy fahombiazan'ny renialezy. Ny soritr'aretina tsy mahafaty izay mipoitra rehefa mihinana voaloboka ny alika dia:
Fanaintainana any anaty
Teo anelanelan'ny taona 1999 sy 2001 dia natao ny fandalinana izay alika 10 no nomena voaloboka betsaka ary vokatr'izany dia nahatonga ireo alika hanana aretim-bavony mahery vaika sy poizina toaka voa.
Ho an'ny loza, izy mekanika biolojika amin'ny fahamamoana Sarotra be ny mamaritra azy, fa ity misy lisitry ny poizina mety misy ao anatin'izany:
Ny nefotoxin amin'ny voaloboka sy ny voaloboka
Fungicides, herbicides, pesticides na fandotoana ny voaloboka
Fandotoana vy mavesatra
Ny fatran'ny vitamina D.
Holatra na bobongolo amin'ny voankazo.
Milaza izany ny statistika iray eo anelanelan'ny 50% ka hatramin'ny 75% ny alika maty noho ny tsy fahombiazan'ny voa vokatry ny fihinanana voaloboka.
50% ka hatramin'ny 75% ny alika maty noho ny tsy fahombiazan'ny voa
Betsaka ny fanadihadiana no namintina fa ny fifandraisana misy eo amin'ny fihinanana voaloboka sy ny tsy fahombiazan'ny voa dia toa tsy kisendrasendra, satria Ny grama 10 ka hatramin'ny 57 grama lanin'ny alika dia miteraka tsy fahombiazan'ny voa.
Mbola zava-miafina ihany koa ny mekanika misy poizina mahatonga ireo karazana hetsika mahatsiravina ireo, satria toa taorian'ny fihinanana voaloboka, ny tsy fahombiazan'ny voa dia 24 ora ka hatramin'ny 72 ora, soritr'aretina mijaly toy ny mandoa sy tsy ampy rano izay lasa matetika kokoa ao anatin'ny 6 ora aorian'ny fihinanana.
Tamin'ny taona 1999, ny tatitra momba ny tsy fahombiazan'ny voa mahery vaika dia nanjary nahasarika ny Animal Poison Control Center (APCC) an'ny American Society for the Fisorohana ny habibiana amin'ny biby (ASPCA).
Aorian'izay, alika 43 no natao, izay alika 28 no nihinana voaloboka, alika 13 no nihinana voaloboka ara-dalàna, ary alika 2 no nihinana ny roa. Ny habetsaky ny voaloboka nentina dia 448 g ary ny habetsaky ny voaloboka voaroba dia 19,6 g / kg. Amin'ireo alika 43 23 izay nitelina ny voaloboka maina sy / na ny voaloboka mahazatra, XNUMX no velona ary sitrana, raha 15 no nohanina ary 5 no maty.
Ny voaloboka dia poizina amin'ny alika
Raha fintinina, ireo famantarana dia manondro ny zava-misy fa Mampahatahotra ny alika ny voaloboka. Izany dia nilaza fa ny mekanika misy poizina mahatonga ny voaloboka hampidi-doza dia mbola tsy hita, saingy misy ny antony hinoana fa ny fifandraisan'ny voaloboka sy ny alika dia antony noho ireo vokatra ireo.
Manomboka izao dia zava-dehibe tokoa ny hametrahanao an'io karazan-tsakafo io amin'ny toerana lavitra ny alikanao ary atokanao ary tadidio tsy mamahana ny alikanao ny sakafo nohaninao, satria io karazan-tsakafo io amin'ny tranga maro dia mety hanimba azy ireo.
Sakano ny alikanao tsy hihinana zava-mamy, satria miteraka olana amin'ny tsinay sy fanaintainana ao aminy izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Mampidi-doza ho an'ny alika ve ny voaloboka?
Fikarakarana lehibe ny vehivavy mandritra ny hafanana